Google gosiputara ohuru Moto E | Site na Linux
Google gosiputara Moto E ohuru
Google gosiputara na Moto E Agba nke Abụọ, nke a bụ ụdị nke emelitere nke mbụ edepụtara na mbido 2014.
Motorola enweela ihe ịga nke ọma na akara Moto ya, gosipụtara ngwa ngwa nke Moto G na Moto X dị mma, wee webata ya ugbu a mbipute ọhụrụ nke Moto E nke nwere mmụba dị ịrịba ama nke ga - eme Smartphone a dị ọnụ ala nhọrọ mara mma.
The Moto E bụ usoro akụ na ụba ma ọ bụ nke njedebe nke usoro Moto, na nke mbụ ya nwere ihuenyo 4.3-anụ ọhịa, 5-inch nke igwefoto na-enweghị ọkụ, 1.2 ihe nhazi abụọ, 1GB RAM, 4GB nke ebe nchekwa dị n'ime na batrị 1,980mAh.
Versiondị ọhụrụ ahụ nwere ihuenyo 4.5-inch mana ọ na-ejigide otu mkpebi nke 960 × 540 pikselụ, ihe nhazi 1.2Ghz quad-core, 1GB nke RAM, 8GB nchekwa dị n'ime, igwefoto 5-megapixel na VGA n'ihu (0.3) 2,390mAh batrị, ọ na-enyekwa njikọ 4G LTE.
El ọhụrụ Moto E A ga-ere ya ọnụ na $ 149, mmụba nke $ 29 ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga, mana ha ruru ya nke ọma ebe ọ bụ na ọ bụ ọnụ ala dị oke ala na-atụle ihe niile enyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Google gosiputara Moto E ohuru
Zuum P60 Atụmatụ